Hevitra Micro Studio BM-800 | Avy amin'ny mac aho
Jordi Gimenez | | Accessories, maro
Hanomboka ity lahatsoratra ity aho amin'ny fanazavana fa ny fahitana ireo tombony sy kalitao omen'ity mic tena ambany ity ho antsika. Raha iray amin'ireo mpampiasa te-hanomboka fandraisam-peo podcast ianao, asa fandraketana tsotra sy ny toy izany ity micro BM-800 ity dia mety ho safidy tena tsara. Raha etsy ankilany, ianao dia mpampiasa mitaky faniriana maniry mikrô fônôla somary matihanina kokoa miaraka amina safidy maro kokoa toy ny fifehezana ny tombony sy ny hafa, tsy natao ho anao ity mikrô ity.
Hanomboka amin'ny filazako ny zavatra niainako manokana tamin'ity mic ity aho ary ny marina dia tsy afaka nifaly kokoa tamin'ny kalitaon'ny feo azo aho na dia tena tsotra aza. Tsy toy ny maodely bitika maro hafa ananantsika eny an-tsena, ity iray ity dia ho an'ireo izay maniry manomboka amin'ny firaketana ary mandany kely indrindra amin'izany. Efa nolazaiko anao ihany fa amin'ny farany ireo izay tia mandray feo dia miafara amin'ny fisafidianana karazana mika hafa hanao ny fandraisam-peony ary mifidy latabatra miharo hanatsara ny kalitaon'ny feo hatramin'ny farany aza. Saingy ireo izay te-hanomboka na handraikitra feo fotsiny indraindray dia tsy mila mandany vola be amin'izany.
Ity faharoa ity no raharahako ary rehefa afaka volana maromaro dia nandrakitra a podcast isan-kerinandro Miaraka amin'ireo mpiara-miasa amiko Nacho Cuesta sy Luis Padilla izay niresahanay momba an'i Apple ankoatry ny zavatra hafa, nanapa-kevitra ny hisafidy mikrô aho nefa tsy namela ny fiainako hamono azy. Talohan'izay aho dia nanao an'ity rakipeo ity ny podcast miaraka amin'ny headphones izay omen'i Apple ao amin'ny iPhone, ny EarPods ary na dia marina aza fa nanolotra kalitao tsara ho ahy izy ireo tamin'ny ankapobeny dia te-hanao dingana lavitra kokoa aho ary izao dia mampiasa ny iray amin'ireto Mics misy tari-dalana miaraka amin'ny mpampitohy XLR eo amin'ny lafiny mic ary 3,5 jack eo ankilany hifandray amin'ny Mac.
Raha hampiasa an'ity karazana mikrô ity dia torohevitra foana ny hanana karatra audio ivelany misy USB na mpampitohy mitovy aminy (saingy tsy voatery raha toa ka Uni-directional tahaka ity BM-800 ity) ary raha ny amiko, ahoana ny efa nohazavaiko amin'ity lahatsoratra ity. ny fomba fandraisam-peo amin'ny Mac, Mampiasako karatra taloha an'ny headphone Steelseries Siberia izay manolotra ahy ny mikrô sy ny fakan-tsarimihetsika tsy miankina. Fa raha tsy manana karatra ianao ary liana amin'ity mikrô ity dia aza manahy fa ity no voalaza ao amin'ny wikipedia momba ity karazana mikraoba tokana ity:
Ny mikrôfôna tsy mitarika na mivezivezy dia ireo izay mora tohina amin'ny lalana iray marenina amin'ny ambiny.
Midika izany fa amin'ny tranga ity BM-800 ity dia tsy hanana olana isika amin'ny tranga tsy fananana karatra audio ivelany na latabatra fampifangaroana, satria ny feontsika na ny feontsika ihany no hisamborana azy amin'ny zoro manokana. Tsy hoe manam-pahaizana momba izany aho fa mitady fandikan-dalàna momba izany Hitako ireo omnidirectionals na antsoina koa hoe tsy misy lalana, ny fahatsapany dia tsy miova arakaraka ny fiovaovan'ny zoro misy ny onjam-peo ary ny an'ny roa tonta izay microphone misy lalana roa, ary noho izany dia avo ny fahatsapana amin'ny lafiny mifanohitra. Mamelà heloka ireo izay mahatakatra ny lohahevitra.
Famaritana sy vidiny BM-800
Amin'ity fotoana ity dia tsy afaka mamela ny masontsivana mikrophone fotsiny aho ary manoro hevitra anao momba ny fividianana raha toa ka manomboka amin'ny rakipeo tsotra ianao na tsy te-hamela vola be amin'ny fividianana mikrô. Ireto ny masontsivana momba ny Micro Studio BM-800:
Mikro misy torolàlana uni
Haavo matetika 20Hz-20KHz
Fahatsapana: 45 dB ± 1 dB
Lanjan'ny vokatra: 0.350 kg
Tariby mpampitohy XLR sy jack 3,5
Mifanaraka amin'ny: Linux, Windows 2000, Windows 7, Windows XP, Windows 98, Windows Vista, Windows 98SE, Mac OS, Windows ME
Raha aorian'ny fahitana ny masontsivana sy ny tombo-tsoa avy amin'ity mikrophone tsotra sy mahaliana ity dia vonona ny hividy azy ianao, Handany 15 euro eo ho eo fotsiny ianao raha hanova ary azonao atao ny miditra ao amin'izay hahitanao azy amin'ny loko isan-karazany ankoatra izany: fotsy, mainty, manga ary mavokely. Mazava ho azy fa tsy microphone misy fiasa matihanina azontsika vidiana ho an'ny studio fandraisam-peo matihanina, fa tsy misy isalasalana noho ny vidiny ambany sy mihoatra noho ny fiasa tsara, tsara ny manomboka manoratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Micro Studio BM-800, tsotra, tsy lafo ary tena mahaliana ny manomboka
Sergio F. dia hoy izy:
Nampifandraisiko tamin'ny pc amin'ny fidiran'ny mic izy ary re miaraka amina tabataba be any am-boalohany rehefa manoratra, inona no atolotrao
Valiny tamin'i Sergio F.
Robert Puig dia hoy izy:
hahazoana tombony betsaka amin'ity mikrô ity dia ilaina 100% ny mividy boaty herinaratra phantom
Valiny tamin'i Robert Puig
Ny olana dia mety noho ny toerana misy ny micro miaraka amin'ireo zavatra hafa. Raha ny amiko, inona no misoroka ny olana dia ny kara-peo USB ananako, fa ny fiezahana hampihena ny habetsahan'ny fidirana avy amin'ny sehatra dia afaka manampy kely. Ataonao mivadika toy ny sary eo amin'ilay boaty ve izy?
tsia, mitazona azy amin'ny tanako miteny avy any ambony, fa andao, mangina dia mirakitra tabataba avy any aoriana
Ny olana amin'ireo mikrôfôna mora vidy ireo dia ny tsy ahafahanao manitsy ny tombom-barotra mitovy amin'izany. Ny vahaolana dia mety mahita rindrambaiko manadio ny tabataba, fa raha be dia be izy io dia ho sarotra.
Hijery aho raha mahita zavatra manampy antsika amin'izany.
Eny, izy ireo no manao ny safidiko amin'ny feo nampavitrika ny fihenan'ny tabataba amin'ny safidin'ny mikrô, ary toa feno avokoa ny tabataba, saingy ankehitriny dia toa malemy sy matotra be izany.
famantarana dia hoy izy:
Ireo olana mahazo azy ireo avy amin'ny tabataba any ivelany, mandra-pahalemen'ny feo. Iray monja dia noho ny teboka iray, izay tsy voatonona tao amin'ilay lahatsoratra mihitsy. Ary io mikrô io ve dia mitaky fampiasana loharanon-kery 48v.
Valio ireo mari-pamantarana
Salama namana, misaotra ny lahatsoratra mialoha.
Vao nividy an'ity mikrô ity aho mba hanaovana rakipeo am-peo miaraka amin'ny Macbook Pro, saingy tsy mazava amiko mihitsy ny fanamboarana tokony ho noforoniko na ny fitaovana ilaiko hampandeha tsara azy. Amin'izao fotoana izao dia fantatro fa ny mampifandray azy fotsiny amin'ny fakan-tsarimihetsika dia tsy mandeha na mahafantatra azy ho feo ivelany ao amin'ny safidin'ny Sound.
Efa namaky momba adaptatera (iRig PRE) aho, na dia tsy haiko aza hoe izany no vahaolana.
Raha misy mahalala na inona na inona momba izany dia tiako ny fanampiana.
Irina Sternik dia hoy izy:
Salama @toni, manana ny olana mitovy amiko aho. Mazava ho azy fa tsy manam-pahefana handeha aho. Nampifandraisiko tamin'ny seranan-tsambon'i Jack izy io ary tsy misy vaovao momba ny fisiany. Ahoana no namahanao azy? Misaotra anao!
Valiny tamin'i Irina Sternik
Joe barzz dia hoy izy:
Fanontaniana iray no nividianako ity microphone ity saingy misy XLR tsy dia fahita firy amin'ny jack USB satria amin'ny lafiny XLR fa tsy pin telo dia mitondra 4. Mampiasa batterie ao anatiny aho raha toa ka azo ampifandraisina amin'ny mixer misy hery phantom fa aiza no misy Mahazo tariby toy izao aho? 4 pin.?. Misy manana info momba ny mpanamboatra ve?
Valiny tamin'i Joe Barzz
Carlos Paredes dia hoy izy:
Nolazain'izy ireo tamiko fa mandoro console sy karatra fanamafisam-peo ireto mics ireto. Marina izany?
Valiny tamin'i Carlos Paredes
Fantatro fa efa taloha ny lahatsoratra, saingy manana fanontaniana aho, mifanaraka amin'ny Windows 8 ve izany?
Ny Apple TV Tech Talks ho an'ny mpamorona dia amin'ny volana Desambra
OS X 10.11.2 beta 3 dia azo zahana amin'ny mpampiasa beta ho an'ny daholobe